အကြင်နာနန်းတော်: ပုံတွေကို မီးအလင်းအမှောင် ပြင်ဖို့
ပုံတွေကို မီးအလင်းအမှောင် ပြင်ဖို့
စောသောထူး: ပုံတွေကို မီးအလင်းအမှောင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ ရှင်ပြပေးပါဗျား။
ဧကရာဇ် : ကိုစောသောထူး ပြောတာ ကျွန်တော်တချိန်က တင်ပေးခဲ့တဲ့ MediaChance_Dynamic_Photo_HDR_5.1.0 ဆော့ဝဲနဲ့ ပုံတွေကို အလင်းအမှောင်ပြင်နည်းကို မေးတာလို့ထင်ပါတယ်။ဧကရီရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ရောက်လာတာနဲ့ တူပါတယ်။အရင်ဆုံး ဆော့ဝဲပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်နော်။
မိမိဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ရှူ့ခင်းပုံလေးတွေကို အလင်းအမှောင်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲလေးသုံးကြည့်နော်။
serial key ပါထည့်ထားပေးပါတယ်.
ပြုလုပ်နည်းလေးတွေ မသိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကိုဧကရာဇ် ဆီမှာ သွားတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်နော်.:D
ပထမဆုံး ဆော့ဝဲကို run ပြီးရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပုံထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း File ထဲမှ create New HDRIဆိုတာလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
အပေါ်ကပုံထဲကအတိုင်း ဘောက်တစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။Add images ဆိုတာလေးကို နိုပ်ပြီး ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ပုံလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ပုံလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် သူက အော်တို ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း မှောင်နေတဲ့ပုံလေးကို အလင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင် ok ပေးလိုက်ပါ။
ဒါက နောက်ထပ်ရွေးခိုင်းတာတွေပါ။လိုချင်တဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီး ok ပေးပါ။
နောက်ဆုံးမှာ ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာပါမယ်။အဲ့မှာ ကိုယ်လိုချင်သလို အလင်းအမှောင်ချိန်ဖို့ လုပ်ပေးထာပါတယ်။သိသိသာသာအလင်းအမှောင်ချိန်းတာက ညာဘက်က filter color ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ လိုသလိုလှည့်လိုက်ရင် အလင်းအမှောင်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကျန်တဲ့ဟာတွေနဲ့လဲချိန်းလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ပုံအောက်ခြေအလယ်မှာ light tuner,Kelvin နဲ့
Match Color ဆိုတဲ့ သုံးခုရှိပါတယ်။
ဒါက Match Colorပါ။ပုံလေးတွေပေးထားပါတယ်။ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ရင် အဲ့ပုံရဲ့ ကာလာတွေကို ပြင်နေတဲ့ပုံပေါ်မှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Kelvin ကို နိုပ်လိုက်ရင် အဲ့ထဲမှာ ရွေးချယ်ဖို့ပုံလေးတွေပေးထားပါမယ်။
ဒါက Light tuner ပါ။Light tuner ဘေးက စုတ်တံလေးလို ဟာလေးရှိပါတယ်။
နိုပ်ပြီး ပုံထဲက အတိုင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာကို အလင်းလိုက်ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင် ok ပေးလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးပြင်လို့ပြီးပြီဆိုရင် အောက်နားက process Save ဆိုတာလေးကိုနိုပ်ပြီး rename ပေးပြီးဆေ့လိုက်ရုံပါဘဲ။ဒါက ကျွန်တော်ပြင်ပြထားတဲ့ပုံနှစ်ခုပါ။
ပို့စ်ရေးသားသူ kg lay ရက်စွဲ Wednesday, May 04, 2011
YouTube Video Downloader Mozilla Firefox add onsေ...